I-HEVC - NAB Bonisa Izindaba nge-Broadcast Beat, Umsakazo Osemthethweni we-NAB Show - NAB Bonisa LIVE
Ikhaya » I-Tag Archives: HEVC
I-Videoys Broadcast Inikeza I-Cloudbass ene-4K Digital Transmitter Systems
I-Videoys Broadcast, umphakeli ophambili wezinhlelo zokulawulwa kwamakhamera wekhwalithi, izixhumanisi ze-RF nokubuyela emuva kwikhamera kubahlinzeki bezokusakaza bangaphandle imemezele ukuthi ihlinzeke izinhlelo ezimbili zokudlulisela ngevidiyo ze-DTC 4K AEON-CC i-Cloudbass, umhlinzeki oholayo wezixazululo zokusakaza. Yakhelwe ngokuqondile izinhlelo zokusebenza zekhamera engenazingcingo ezisezingeni eliphakeme i-AEON-CC isebenzisa ubuchwepheshe be-DTC's next -izukulwane ubuchwepheshe be-UHIV obunika izithombe ze-UHD. I ...
Ngo-Okthoba 12th kulo nyaka, umgijimi odumile we-marathon u-Eliud Kipchoge wenza umhlaba uhlale phezulu, ubukele futhi ulalele njengoba egijima umncintiswano wokuqala wamahora amabili, ebeka irekhodi lomhlaba elingekho emthethweni, ebeka isikhathi esingenakukholwa se1: 59: 40 Ineos 159 Inselelo. Umcimbi wenzeka eVienna, e-Austria, kanti uKipchoge wasebenza isikhathi esiseduze kwemizuzu emibili ngokushesha kuka ...
I-LiveU Inwebisa Ukusakazwa Okugcwele Komhlaba Wamahhashi WaseNingizimu Afrika
Ubuchwepheshe be-LiveU busetshenziselwa ukukhulisa ukubandakanyeka kwabalandeli kuyo yonke imboni yezomjaho wamahhashi eyaziwayo yaseNingizimu Afrika. Esikhundleni sobuchwepheshe bendabuko besetellite, i-fiber kanye ne-microwave, izingxenye zensimu ephathekayo ye-LiveU ziyasatshalaliswa ukuze kudalwe ukusakazwa okuthokozisayo okubukhoma kusuka kumathrekhi omjaho ngokwawo, ngaphakathi kwezikhungo zokubheja, kanye nemicimbi yemiklomelo nemicimbi ekhethekile. Okuphambili kulo mkhuba yiTellytrack Horseracing, Izithombe ezinhle kakhulu nezemidlalo ...
Ikhasinkomba 1 of 2912345	»	1020...Last »